Ungalwandisa njani ubonelelo lwakho lobisi
Yintoni ekufuneka ndiyazi malunga nendlela amabele am avelisa ngayo ubisi?
Ngaphambi kokuba ubisi lwakho oluvuthiweyo lungene, umzimba wakho wenza inani elincinci lobisi lwebele olubizwa ngokuba yicolostrum. IColostrum luhlobo olukhethekileyo lobisi olutyebileyo kwizakhamzimba kunye neentsholongwane (iiproteni ezikhusela amajoni omzimba wosana lwakho). Ubisi lwakho oluqolileyo luya kuza malunga neentsuku ezi-2 ukuya kwezi-5 emva kokuba umntwana wakho ezelwe. Amabele akho anokuvelisa ubisi olwaneleyo kusana lwakho ukuba uhleli kakuhle, kwaye umtyisa rhoqo kwaye rhoqo. Ezinye izinto zinokuchaphazela ubonelelo lwakho lobisi. Unokonyusa ubisi lwakho kwakhona ukuba luyancipha.
Ukutya okuncinci rhoqo unokunciphisa ubisi lwakho. Ubisi lwakho lwebele lunokuhla ukuba usana lwakho alukhupheli amabele akho ngokupheleleyo ngexesha lokondla. Usana lwakho alunakukhupha amabele akho ukuba ngaba ukutyisa kufutshane kakhulu, okanye akunamathelwanga ngokuchanekileyo. Amabele akho aya kwenza ubisi oluncinci ukuba kukho imfuno encinci.
Amayeza Njengolawulo lokuzalwa, ukungabikho komzimba, kunye neyeza zentlungu, kunokunciphisa ukubonelela ngobisi.
Uxinzelelo unokunciphisa ubisi lwakho. Njengomama omtsha, usenokuba noxinzelelo olwandayo, udinwe kakhulu, okanye ukhathazeke ngakumbi. Uxinzelelo lunokubangela ukuba uncancise kancinci okanye ixesha elifutshane.
Ukutshaya notywala Unokunciphisa ubisi lwakho. Ukumodareyitha ukuya kwisixa esikhulu sotywala kunokunciphisa ubisi lwakho.
Utyando lwebele unokunciphisa ubisi lwakho. Oku kubandakanya utyando lwebele, okanye utyando ukunciphisa ubungakanani bebele. Imithambo, imibhobho yobisi, kunye neencindi zobisi zinokonakaliswa ngexesha lotyando.
Umntwana wakho ujongeka ngathi uyehla emzimbeni.
Usana lwakho luneentsuku ezi-4 okanye nangaphezulu ubudala kwaye lunee-diapers ezimanzi ezingaphantsi kwe-6 ngosuku.
Usana lwakho luneentsuku ezi-4 okanye nangaphezulu ubudala kwaye lunokungaphantsi kokuhamba kwamathumbu amathathu ngosuku.
Usana lwakho lubonakalisa iimpawu zendlala rhoqo kunesiqhelo okanye lusebenza ngokungathi alufumananga bisi lwaneleyo emva kokondla. Naye usenokungalali kakuhle.
Awuziva okanye ubone utshintsho emabeleni akho, njengokugcwala ngaphambi kokondla kunye nokuthamba emva. Kuya kufuneka ulubone olu tshintsho kwisithuba seentsuku ezi-5 emva kokubeleka.
Usana lwakho luba yinyongo (ulusu kunye namhlophe amehlo alubhelu).
Yondle umntwana wakho izihlandlo ezisi-8 ukuya kwezili-12 ngosuku ngalunye. Okukhona usoloko uncancisa, kokukhona amabele akho aya kwenza ubisi. Luncede usana lwakho kamsinya nje xa luthe walamba. Iimpawu zendlala zibandakanya ukubeka isandla emlonyeni wakhe, ukwenza imisindo yokufunxa, kunye nokuhamba ngaphezulu kunesiqhelo. Kuya kufuneka ukuba uvuse umntwana wakho ukuba ancancise rhoqo de ubisi lwakho lonyuke. Sukubeka ixesha oza kulincancisa ngalo usana lwakho. Vumela umntwana wakho ancancise ebeleni ngalinye ngalo lonke ixesha umtyisa.
Nceda umntwana wakho afumane i-latch efanelekileyo. Bamba i-nape entanyeni yakhe ukumnceda kwi-latch yakho ebeleni. Chukumisa umlomo wakhe ongaphezulu ngengono yakho ulinde yena ukuba avule umlomo wakhe ngokubanzi. Umlomo womntwana wakho osezantsi kunye nesilevu kufuneka uthinte i-areola (indawo emnyama ejikeleze ingono) kuqala. Mncede ukuba afumane uninzi lwe-areola emlonyeni wakhe ngangokunokwenzeka. Kuya kufuneka uzive ngathi umntwana wakho akazokuzahlula ngokulula ebeleni. Yophula ngobunono ukutsala nokuma kwakhona ukuba umntwana wakho uncanca kwingono kuphela. Thetha kumcebisi we-lactation ukuba ufuna uncedo kwi-latch yomntwana wakho.
Qinisekisa ukuba amabele akho athululeke ngokupheleleyo emva kokondliwa. Veza ubisi ngempompo yebele emva kokondla ukukhupha onke amabele akho. Impompo yebele inokukunceda ukukhuthaza amabele akho ukuba enze ubisi oluninzi. Ukuncancisa amabele kunokunceda ekuvuseleleni amabele akho kunye nokunyusa ubisi lwakho. Mpompe amabele rhoqo emva kweeyure ezi-2 ukuya kwezi-4 ukuba ukude nosana lwakho. Ubisi lwebele olumpontshwayo lungagcinwa kwaye lusetyenziselwe ukondla kamva.
Ndingazikhathalela njani ngelixa ndincancisayo?
Landela isicwangciso sokutya esinempilo. Isicwangciso sokutya esisempilweni sinika inani leekhalori kunye nezondlo ozifunayo ngelixa uncancisa. Umzimba wakho udinga iikhalori ezingaphezulu kunye nezondlo ukukugcina usempilweni kwaye uxhasa imveliso yobisi. Isicwangciso sokutya esisempilweni siquka iintlobo ezahlukeneyo zokutya ezivela kuwo onke amaqela okutya. Ufuna malunga neekomityi ezisi-8 ukuya kwezi-12 zotywala ngosuku ngalunye ukuthintela ukomisa emzimbeni kwaye ugcine ubisi lwakho lubonelelwa. Sela isiselo ngalo lonke ixesha usancancisa ukukunceda ufumane ulwelo olwaneleyo. Khetha ulwelo olungenayo icaffeine. Imizekelo ngamanzi, ijusi, kunye nobisi. Buza umboneleli wakho wezempilo ngolwazi oluthe kratya malunga nokuncancisa kunye nokutya kwakho.
Lawula uxinzelelo lwakho. Ukuphumla kunokunceda ukunciphisa uxinzelelo lwakho kwaye kukuncede uzive ungcono. Ukuphefumla ngokunzulu, ukucamngca, nokumamela umculo nako kunokukunceda ujongane noxinzelelo. Thetha nomboneleli wakho wezempilo malunga nezinye iindlela zokulawula uxinzelelo.
Thetha nomboneleli wakho wezempilo ngaphambi kokuba uthathe naliphi na iyeza. Oku kubandakanya onke amayeza amayeza kunye nalawo e-counter. Amanye amayeza anokungena kubisi lwakho lwebele kwaye achaphazele umntwana wakho.
Musa ukutshaya. Inikotini ingena kubisi lwakho lwebele. Usana lwakho luchanabeke kwezi khemikhali ngokuncancisa nangokuphefumla umsi wecuba. Sukusebenzisa i-e-cigarettes okanye icuba elingenamsi endaweni yecuba lakho okanye ukukunceda uyeke. Zisenayo nicotine. Buza umboneleli wakho wezempilo ukuba ufuna ukutshaya ngoku kwaye ufuna uncedo lokuyeka.
Nciphisa okanye unqande utywala. Ukuba ukhetha ukusela utywala, ncancisa umntwana wakho phambi kokuba usele utywala. Musa ukuncancisa usana lwakho ubuncinci iiyure ezi-2 emva kokuba usele isi-1. Isiselo esinye sotywala zii-ounces ezili-12 zebhiya, ii-ounces ezi-4 zewayini, okanye ii-½ zee-ounces zotywala.
Gcina idayari. Bhala phantsi ngalo lonke ixesha uncancisa usana lwakho naxa umpompa amabele. Yenza inqaku lokuba ungapompa ubisi oluninzi ngalo lonke ixesha. Unokubhala phantsi xa umntwana wakho emanzi okanye emdaka. Idayari inokukunceda wena nomboneleli wakho wezempilo ukuba uyazi ukuba umntwana wakho ufumana ubisi olwaneleyo.
Usana lwakho luneentsuku ezi-4 okanye nangaphezulu ubudala kwaye lunama-diapers angaphantsi kwama-6 ngosuku.
Usana lwakho luneentsuku ezi-4 okanye nangaphezulu ubudala kwaye lunokungaphantsi kokuhamba kwamathumbu amathathu ngosuku ngalunye.
Umntwana wakho akafumani ubunzima okanye ujongeka ngathi uyehla emzimbeni.
Usana lwakho lusondla amaxesha angaphantsi kwesi-8 ngosuku okanye kubonakala ngathi alutyi ngokwaneleyo ngexesha lokutya.
Usana lwakho lubonakala ngathi luxinene kunesiqhelo okanye lubonakala ngathi alunawo amandla okuncancisa.
Amabele akho awaziva egcwele, okanye awuvuza ubisi lwebele kwiintsuku ezi-5 emva kokubeleka.
Usana lwakho lunombala omtsha nolwandayo wolusu lwalo okanye abamhlophe ngamehlo alo.
Unelungelo lokunceda ekucwangciseni ukuba uza kumondla njani umntwana wakho. Ukukunceda kwesi sicwangciso, kuya kufuneka ufunde kangangoko unako malunga nokuncancisa. Buza umboneleli wakho wezempilo imibuzo malunga nokuncelisa. Ungathetha naye malunga neyona ndlela ifanelekileyo yokondla umntwana wakho. Olu lwazi lungasentla luncedo lokufundisa kuphela. Akujoliswanga njenge ngcebiso yezonyango kwiimeko ezithile okanye unyango. Thetha nogqirha wakho, umongikazi okanye usokhemesti ngaphambi kokulandela nayiphi na irejimeni yonyango ukubona ukuba ikhuselekile kwaye iyasebenza na kuwe.
brompheniramine pseudoephedrine dm ephezulu
yintoni imowudi ye-incognito kugoogle
www youtube com ngena
keppra iziphumo ebezingalindelekanga zexesha elide